Kubika Mapepa ndeye webhusaiti yeActualidad Blog. Yedu webhusaiti yakatsaurirwa ku nyika yegastronomy, uye mariri tinokurudzira mazano ezvidimbu zvepakutanga apo isu tichitaura nezvese zvine chekuita nekubika uye chikafu.
El Edhisheni timu yeCookery Recipes Iyo inoumbwa ne vaneshungu vane chikafu vakafara kugovana hunyanzvi hwavo nehunyanzvi newe. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chayo, usazeze kuita tinyore isu kuburikidza neichi fomu.
Kubika chave chimwe chezvinhu zvandaifarira kubvira ndichiri mudiki uye ndaishanda sedhongi raamai vangu. Kunyangwe iine zvishoma zvine chekuita nebasa rangu razvino, kubika kunoramba kuchindipa yakanaka nguva. Ini ndinoda kuverenga nyika uye epasi rese mablog mabiketi, ndichigara ndichiziva nezvazvino zvinyorwa uye ndichigovana zviedzo zvangu zvekugadzirira nemhuri yangu uye ikozvino nemi.
Ini ndinoda kubika, ndeimwe yemitambo yangu, ndosaka ndakatanga bhurogu yangu, Kubika naMontse, mandiri ini ndinogovana mabikirwo ehupenyu hwezuva nezuva nenzira yakapfava uye yakapusa uye ndinakirwe nayo.
Semunhu anoda chikafu chakanaka, ini ndinozviti ndiri fan wekubika mune zvese. Mukusarudzwa kwezvigadzirwa uye musanganiswa wezvinhu zvinonaka, ini ndinowana yangu nguva yekugona kwemazuva ese. Pano ini ndinogovana zvandinofarira madhishi uye mabikirwo, musanganiswa wechinyakare chikafu uye wepasi rose chikafu.
Ndakafarira kubika kubva ndichiri mudiki, parizvino ndakazvipira kugadzira zvangu zvekubika uye kugadzirisa zvese zvandakadzidza pamusoro pemakore, ndinovimba unofarira mabikirwo angu sekufarira kwandinoita kuvagovana newe.
Pfungwa dzangu dzinogara dzakavhurika uye dzakagadzirirwa kugadzira izvozvi zvakanditungamira kune nyika yemakicheni. Ndinovimba unofarira mabikirwo angu uye woaisa mukuita. Izvo zvinonaka!
Mumwe wechechi yekunonoka kubika uye doro reGuinness, ndanga ndichigadzirira zvekunanzva minwe kwenguva yakareba. Chinyakare, chazvino, ndinotsunga kuita chero chinhu! Kuedza uye kuyedza mavhenekeri matsva, ndinotarisira kuti munoda mabikirwo angu sekuita kwandinoita ini.